ယန်ဇီမြစ်တစ်လျှောက် တရားမဝင်ငါးဖမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရန် AI ကူညီပေး - Xinhua News Agency
နန်ချန်း၊ မေ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယန်ဇီမြစ်တစ်လျှောက် ၁၀ နှစ်ကြာ ငါးဖမ်းခြင်းတားမြစ်ချက်အရ မြစ်ရေပြင်ဧရိယာတွင် တရားမဝင်ငါးဖမ်းခြင်းများကို တိုက်ဖျက်ရန် ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းအဖြစ် ဉာဏ်ရည်တု (AI) နည်းပညာစနစ်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။China Tower Corporation လီမိတက်၏ Jiujiang ရုံးခွဲမှ တပ်ဆင်သော AI သတိပေးစနစ်အား ဧပြီလတွင် တရားဝင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းရှီးပြည်နယ်၊ Jiujiang မြို့ရှိ ယန်ဇီမြစ်၏ ၁၅၂ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော မြစ်ကမ်းပါးတစ်လျှောက်တွင် တရားမဝင်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မီလီစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုများကို ၃၇ ရုပ်ထွက်မြင့်မားသောဘက်စုံကင်မရာများဖြင့် ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် တိုးတက်မှုရှိစေရန် big data နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာစနစ် စသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို စိစစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယန်ဇီမြစ်၏ ဇီဝမျိုးကွဲများအား ပိုမိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်းရှိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဧရိယာ ၃၃၂ ခုတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ ၁၀ နှစ်ကြာ ငါးဖမ်းခြင်းတားမြစ်ချက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ တားမြစ်ချက်ကို မြစ်၏ သဘာဝရေလမ်းကြောင်းများနှင့် မြစ်လက်တက်များတွင်လည်း တိုးချဲ့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် သင့်လျော်သောဥပဒေထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ အားနည်းချက်က တရားမဝင်ငါးဖမ်းခြင်းကို ကြီးကြပ်ရန် အဓိက အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
“အစောပိုင်းကတော့ တရားမဝင် ငါးဖမ်းခြင်းကို စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် သတင်းတွေနဲ့ ကင်းလှည့်တာတွေအပေါ်ပဲ အဓိကအားထားနေခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက ကိစ္စနှစ်ခုဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့က အမြဲပဲ လူအင်အားနည်းသလို တစ်ဖက်ကလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ သက်သေစုဆောင်းဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်” ဟု Jiujiang ရှိ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူ Zhou Jie က ပြောခဲ့သည်။
AI စနစ်သည် ကင်မရာများအတွင်း မမှန်သောလှုပ်ရှားမှုများကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပူးတွဲပါ app သို့ သတိပေးစနစ်များ ပေးပို့နိုင်ကာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကင်းလှည့်သူများအား သတိပေးနိုင်ကြောင်း Zhou က ဆိုသည်။
“AI စွမ်းအင်စနစ်မှာ အခုဆိုရင် သတ်မှတ်နေရာများ ပိုမိုထားရှိစောင့်ကြည့်နိုင်သလို ထိရောက်မှုလည်း ပိုပြီးရှိပါတယ်” ဟု Zhou က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တစ်လပင်မကြာသည့်ကာလအတွင်း ယင်းစနစ်ဖြင့် တရားမဝင်ငါးဖမ်းမှု ၂၈ ခုကို စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူစနစ်များကို ချုံချင့်နှင့် အန်ဟွေး စသည့် ယန်ဇီမြစ်တစ်လျှောက်ရှိ အခြားပြည်နယ်အဆင့်ဒေသများတွင်လည်း ဖြန့်ကျက်ထားပြီးဖြစ်သည်။
“ယန်ဇီမြစ်က အမြဲတစေ ရေနေသတ္တဝါတွေရဲ့ သုခဘုံလေးဖြစ်စေဖို့ ၁၀ နှစ်ကြာ ငါးဖမ်းခြင်းတားမြစ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု Zhou က ဆိုသည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-05-17 12:48:13
NANCHANG, May 17 (Xinhua) — An artificial intelligence (AI) technology system has been applied along the Yangtze River asasupplementary method to combat illegal activities in water areas undera10-year fishing ban.
Installed by the Jiujiang branch of China Tower Corporation Limited, the AI warning system was officially put into use in April. It can detect illegal fishing activities in milliseconds alonga152-km riverbank of the Yangtze River in Jiujiang city, east China’s Jiangxi Province.
“Earlier, we mainly relied on reports and patrolling to monitor illegal fishing, but that had led to two issues. On the one hand, it was difficult to investigate and collect proof, while on the other hand, we’re always understaffed,” said Zhou Jie, who is in charge of fishery administration in Jiujiang.
“The AI-powered system has made monitoring much more targeted and efficient now,” Zhou added.
“We look forward to the application of more advanced technologies to ensure proper implementation of the 10-year fishing ban so that the Yangtze River will always beaparadise for aquatic life,” Zhou said. ■
Photo : Fishery administrative boats cruise to inspect the implementation of fishing ban in the Yangtze River on Jan. 8
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ကရာချိအကြမ်းဖက်မှုတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည့်တရုတ်နိုင်ငံသား ဆရာ၊ဆရာမ များအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားပြုလုပ်